Raha ny marina, ny fahadisoam-panantenana eo amin’ny fiainana dia tsy inona akory fa lalàm-pitiavana. “Misy zavatra tiako ambara aminao anio”, hoy ny Tompo amin’ireo olomasiny izay tra-pahoriana. “Ho bitsibitsihiko eo am-poton-tsofinao izany, mba tsy hatahoranao ireo tafiotra mety hahakasika (hamely ) anao, ary mba tsy harary loatra ireo tsilo tsy maintsy hitsahinao ( ianao rehefa tsy maintsy handeha eo ambony tsilo). Fehezan-teny kely ihany izy io: avelao hidina any anatin’ny fonao lalina any ka ho toy ny ondana hametrahanao ny lohanao izay reraka: “Avy amiko izao zavatra izao”.
Moa tsy nangataka ny mba hahay hanetry tena ve ianao? Koa ao amin’ny sekoly hianarana io lesona io no nametrahako anao. Ny olona manodidina anao sy ireo izay miara-dia aminao no fitaovana hahatanterahan’ny sitrapoko aminao. Misy olana ara-bola va (ve) ianao? Sarotra aminao va (ve) ny mahita ny ampy? “ Avy amiko izao zavatra izao”, satria Izaho no manana ny zavatra rehetra. Tiako ho avy amin’ny tànako no handraisanao ny zavatra rehetra, ary hiankina amiko tanteraka ianao. Tsy misy fetrany ny harenako (Filipiana 4.19). Tsapao ny teny fampanantenako (Izahao toetra amin’ny teny nampanantenaiko Aho), ary aoka tsy ho lazaina ianao, toa an’i Isiraely tany an’efitra, hoe: “ Kanefa, na dia nataoko aza izany teny izany, mbola tsy ninoanareo ihany Jehovah Andriamanitrareo” (Deoteronomia 1.32).
Nisy olona nanendrikendrika anao ve? Avelao Izaho no hikarakara izany ary avia mialoka eo ambany elatro, “mba tsy ho azon’ny lela mifanditra” (Salamo 31.20). Fa “hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava (Aho), ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana” (Salamo 37.6). Potika va ny lamina napetrakao? Torotoro sy lanaka va ianao? “Avy amiko izao zavatra izao”. Naminavina zavatra ianao, dia tonga nangataka tamiko ny mba hitahiako izany; nefa Izaho nitady handamina izany ho anao ka ho tompon’andraikitra amin’izany, satria “mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny hanao izao” (Eksodosy 18.18). Tsy inona ianao fa fitaovana, ary tsy ianao no Mpampiasa izany ( Fitaovana ihany ianao fa tsy Ilay mpampiasa).
« Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana » (Hebreo 9.27), hoy ny Baiboly. Raha mandà tsy hiatrika ny fahamarinana ianao fa te-hijanona hatrany ao amin’ny manjavozavo, dia tataovan-doza ( tandindonin-doza ianao) satria hifanatrika amin’Andriamanitra aorian’ny fahafatesana. Hifanatrika Aminy toy ny Ray izay hitsena anao eo an-tokonana ve ianao, sa hifanatrika Aminy toy ny Mpitsara izay hamoaka didy tsy azo ivalozana ny aminao ? Didy haharitra mandrakizay izany ! Tsarovy anefa fa tsy zakan’Andriamanitra ny fahotan’ny olona, ny fahotantsika. Raha mijery avy eny an-danitra Andriamanitra, dia olona tsy mba manao izay mahafaly Azy no ahitany anao. Miaina araka ny filàna ara-nofo ianao, entanin’ny filàn’ny fonao, ary manao ny sitraponao, izay tsy mifanaraka amin’ny an’Andriamanitra. Noho izany dia toy ny maty ara-panahy no fahitàny anao noho ireo fahadisoanao sy helokao. Tsy ny fiezahanao hanamarin-tena hoe tsy manao ratsy no hahafahanao manova ny fitsaràn’Andriamanitra anao ; satria tsy ny fijerinao no inona, fa ny fijerin’Andriamanitra.
Ireo toerana ahitanao ny Bibliothèque chrétienne:
Lot IV L 39 D - Anosivavaka Ambohimanarina
Lalan’ny Bus 194 Akaikin’ny Pâtisserie Le Clafoutis
Tél. : (261 20) 23 330 67 Portable : 032 42 552 35
033 15 552 35
E-mail : bibliothequechretienne@gmail.com
Librairie Ny Mpamafy
IA 48 bis Avenue Grandidier
Isoraka (face FJKM Isotry Fitiavana)
Portable : 034 14 552 35
Lot 0512-A-235 (Ex-Primevère)
110 – Antsirabe
Portable : 034 04 699 11
614 – Taolagnaro
Portable : 033 21 236 44
301 – Toamasina